विश्वकपमा पाकिस्तानको खराब प्रदर्शन, ८० रन नबनाउँदै गुमायो ७ विकेट ! - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपमा पाकिस्तानको खराब प्रदर्शन, ८० रन नबनाउँदै गुमायो ७ विकेट !
काठमाडौं, जेठ १७ । इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेलमा पाकिस्तानले खराब प्रदर्शन गरेको छ । उसले ८० रन बनाउँदै महत्वपूर्ण ७ विकेट गुमाइसकेको छ ।
पाकिस्तानले फखर जमान, इमामउल हक, हरिस सोहेल, बाबर आजम कप्तान सररफराज अहमद, इमाद वासिम र सादव खानलाई सस्तैमा गुमाएको हो । बलिङमा वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे रसेल, ओसेन थोमस र कप्तान जोसन होल्डरले २–२, सेल्ड्रोन केट्रोलले एक विकेट लिए ।